भवन निर्माण संहिता अनिवार्य, निर्धारित रकमबाट घर बन्नेमा आशावादी छैनन् पीडित
कसरी बनाउने घर ? हेर्नुहाेस् सरकारले तयार पारेकाे भवन निर्माण संहिता
| 2017-11-29 Published
निमार्ण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता अनिवार्य बनाएको छ । तर, लाभान्वित जनता सरकारले निर्धारण गरेको ३ लाखमा कस्तो र कसरी घर बनाउने भन्नेमा अन्योलमा छन् ।
विभिन्न समुदाय, निर्माणकर्मी, ठेकेदार तथा प्राविधिकलाई तालिम दिँदै आएपछि सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउने पीडितको संख्या बढ्न थालेपनि सरकारले दिएकाे रकमले घर बन्नेमा अाशावादी छैनन् ।
२०७२ मा गएको भूकम्पलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित घर बनाउन सरकारले बनाएको भवन निर्माण ऐन, २०५५ र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० लागू गरेको छ ।
भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बिस्थापित हुनु नपरोस् भनेर सरकारले भवन संहिता कडाइका साथ लागू गर्न निकायलाई दबाब दिएको छ । भूकम्पपछि घर निर्माण गर्दा सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो चेतना भएको विभागका उपमहानिर्देशक मनिराम गेलालले बताए ।
मापदण्ड नपुगेका घर तथा भवनको नक्सा नै पास नहुने प्रावधान बनाइएको छ ।
यसै अनुरुप भूकम्प गएको दुई वर्षमा अनिवार्य रुपमा निर्माण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेपनि अहिलेसम्म कतिपय स्थानमा पहिलो किस्साको ५० हजार लिएर बसिरहेको गुनासो आएको छ । पैसा पहिलो किस्सा मात्र पाएर पनि सरकारी इन्जिनियर कोही नआएकोले घर निर्माण अन्योलमा परेको छ ।
खोटाङका स्थानीयबासी घनश्याम दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म घर बनाइसक्नु पर्ने हो तर सरकारले बल्ल पीडितलाई ५० हजार मात्र दिएको छ । पैसा बाँडेर पनि सरकारी इन्जिनियर अनुगमनमा नआउँदा घर सुरु गर्नु कि नगर्नु भन्ने कुरामा हामी दोधारमा छौँ ।’
उनले थपे, आफैँ बनाउन सुरु गरौँ सरकारी मापदण्ड पूरा भएन भनेर पास हुँदैन । कुरौँ त अझै कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो अत्तोपत्तो छैन ।’
पछिल्लो समयमा आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका गगनचुम्बी भवन निर्माण बढिरहेको छ । यसरी निर्माण भएका कतिपय घर तथा भौतिक संरचना भवन संहिता विपरित छन् ।
राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालका अनुसार भूकम्प पीडित ७ लाख ६७ हजारले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्नेमा अहिले सम्म ६ लाख ४६ हजारले पहिलो किस्ता पाएका छन् ।
यसैगरी, दोस्रो किस्ताको रकम १ लाख १५ हजारलाई दिने गरी स्वीकृत भइसकेको छ ।
भूकम्पपछि सरकारले घर निर्माण गर्न ग्रामीणमा १७ र सहरी क्षेत्रका लागि १४ घरको नमूना डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ ।
भूकम्प पीडित घरधनीले नमूना नक्सा र त्यहीअनुसार घर निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हेर्नुहाेस् सरकारले तयार पारेकाे नमुना घरकाे भिडियाे
बुधबार १३, मंसिर ०७४
चक्रपथमा गुड्ने भो ‘मोनो रेल’, बनाउने ...
मुख्य राजमार्गलाई सरकारले बनाउँदैछ ‘...
कसरी गर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले य...
रुग्ण उद्योगको ऋणमात्रै बोक्ने कि नय�...
ओली सरकारका यस्ता छन् समृद्धि योजना...
ओली–मोदी अंकमालः भारतीय सञ्चारमा छाय...
को हुन् ‘फटाहा’ ? फेवा ताल मिच्दै आफ्न�...